Alma Zadic oo ah Wasiirka Cadaalada ee Austria oo noqotay qaxooti reer Bosnia oo guuleysatay… – Hagaag.com
Alma Zadic oo ah Wasiirka Cadaalada ee Austria oo noqotay qaxooti reer Bosnia oo guuleysatay…
Posted on 8 Febraayo 2020 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Waxay ahayd ilmo qaxooti reer Bosnia ah, oo hadda noqotay Wasiirka Caddaaladda ee Austria.
Alma Zadic ayaa waxay timid caasimada Austria ee Vienna iyadoo ka timid Bosnia markay ahayd toban sano jir, waxayna hadda tahay wasiirka cadaaladda oo isbahaysi “dhib badan” ay ku yihiin cagaarka libarliyiinta ah iyo muxaafidka xagjirka ah oo ka soo horjeeda soogalootiga.
Warbixinta Catherine Penhold ee New York Times waxay muujineysaa in tan iyo markii Zadic xafiiska la wareegtay bishii la soo dhaafay ay ku jirto ilaalada Booliska, kadib markay heshay hanjabaado badan oo aan xad laheyn, tii ugu dambeysay aheyd handadaad loo qoray oo la yiri ( xabbad ayaa laguu xajisay).
Zadic, ayaa ah gabadha reer qaxooti Bosnian ah, waxay gashay siyaasada, seddex sano ka hor, waxayna leedahay hadaf cad: iska caabinta xagjiriinta sii koraya ee midigta fog.
Tani, marka la soo gaabiyo, waa jahwareerka anshaxeed ee haysta cagaarka libaraalka ee taageersan qaxootiga ee Austria, iyadoo la mideynaayo dadaallada lala yeelanayo muxaafidiinta matalaya saldhig shacbi ee R/wasaaraha Sebatian Kurz oo ka soo horjeeda socdaalka.
Sheekada Zadic waxaa loo tixgeliyey siyaabo badan sheeko casri ah .. Gabar qaxooti ah oo ku guuleysatay waxbarashadeeda isla markaana si dhakhso ah ugu kacda shaqadeeda waxaana loo doortay baarlamaanka waxayna xubin muhiim ah ka tahay Golaha Wasiirrada, waxayna jirtaa 35 sano. Laakiin waxa ka dhigay in Zadic hormuud u noqoto dad badan oo ku gadaaman u rogtay himilooyinkooda dadka kale, sida mid ku jeesjeesay Twitter-ka “Hadda Ajaanibta ayaa hela jagooyin wasiirnimo waa burburka Austria”. Mid kale ayaa sidoo kale ku jees jeesay, “Maxaan uga dhigi weynay argagixiso mas’uul ka ah amniga gudaha?”
Qiimaha kaqeybgalku waa mid weyn heerarkeeda shaqsiyadeed iyo mid siyaasadeedba Zadic ayaa qirtay mar ay dhowaan bixisay wareysi ayaa ku adkeysatay in qiimaha kaqeybgal la’aanta dowlada oo loo baneeyo garoonka midigta xagjirka ah waxay noqoneysaa mid aad u sareeysa.
Awooddeeda xilligan, sida Zadic leedahay, waajibkeeda iyo kan xisbigeeda cagaarka ma ahan keliya inay horumariyaan ajandaha cagaarka oo muddo dheer la sugayey dalkan yar ee ku yaalla buuraha Alpine-ka, laakiin iska caabinta qeybaha ku talax tagay wadaniyada iyo dhowrista xuquuqda aasaasiga ah ayaa ka mid ah.
Qoraaga warbixinta ayaa ka faallootay in qaabka ay Zadic ugu dhaqaaqayso qulqulatadan ay siyaabo badan u noqon doonto sheekada isbaheysiga kacsan oo si dhow isha ugu hayaan dalalka deriska ah, gaar ahaan Jarmalka, halkaasoo dowladda xigta ay sidoo kale noqon doonto isbahaysi muxaafid iyo cagaar.
Zadic waxay ku dhalatay magaalada Tuzla, oo ah magaalo warshadeed oo ku taal geeska waqooyi-bari ee Bosnia iyo Herzegovina oo goobjoog u ahayd xasuuqii 1995-kii intii lagu jiray dagaalladii Balkan-ka.
Waxay ahayd toddoba jir markii dagaalku qarxay waxayna la carartay qoyskeeda markay toban jirsatay, waxayna khibrad aad u adag la kulantay caruurnimadeedii, laakiin waxay u ahayd shidaalka ka caawiyay inay sii wadato jidkeeda, halkaas oo ay ku baratay sharciga magaalada Vienna waxayna sii wadday waxbarashadeeda oo ka heshay deeq waxbarasho oo dhammaystiran Jaamacada Columbia ee New York si ay uga soo qaadato shahaadeeda sare, waxayna ku noqotey Vienna iyadoo wadata shahaadada PhD xagga sharciga xuquuqda aadanaha.
Zadic waxay u shaqeeysay Maxkamada Cadaaladda ee caalamiga ah ee The Hague ka hor inta aysan noqon qareen guuleystey shirkad caalami ah oo ku taal Vienna.
(Dadaalaa wuu gaaraa) (من جد وجد ومن زرع حصد ) markaan yareyn oraahdii nala baray ayey sidaasi aheyd.